भान्सा छोएको निहुँमा दलित बालकमाथि निर्घात कुटपिट – Sajha Bisaunee
भान्सा छोएको निहुँमा दलित बालकमाथि निर्घात कुटपिट
वार्षिक परीक्षा सकिएकाले विद्यालयमा बिदा थियो । बिदाको समयमा उनीहरू घर नजिकै खेल्दै थिए । त्यत्तिकैमा चक्र शाहीले दौंतरी भीमबहादुर विकलाई आफ्नो घरभित्र टर्च (लाइट) लिन पठाए । साथीको आग्रहलाई नकार्न नसकेपछि भीमबहादुरले घरभित्र छिरेर टर्च ल्याए । त्यसको परिणाम गैरदलितको घरभित्र पसेर भान्सा छोएको आरोपमा उनले बुधवार निर्घात कुटाइ खानुपर्‍यो ।
पश्चिम सुर्खेतको कुनाथरीस्थित गवेना गाउँका यी दुई बालकबीच कुनै जातीय भेदभाव थिएन । दलित र गैरदलित परिवारमा जन्मिए पनि उनीहरूबीच घनिष्ट मित्रता थियो । भान्सा छुँदा साथीले कुटाइ खानुपर्ला भन्ने सोचेको भए सायद चक्रले आफ्नो घरभित्र पस्न बल गर्ने थिएनन् । तर दलितले भान्सा छोएको भन्दै चक्रका अभिभावकले ९ वर्षीय भीमबहादुर विकलाई निर्घात कुटपिट गरे । कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि वीरेन्द्रनगर ल्याइएको छ । भीमबहादुर विकको शरीरभरी निलडाम छन् । छिमेकीको कुटाइपछि घाइते भएका उनी हिँड्डुल गर्न सक्दैनन् ।
स्थानीय वरडाँडा विद्यालयमा कक्षा ३ मा अध्ययरत भीमबहादुरले साथीको घरभित्र पस्दा कुटाइ खानुपर्ला भन्ने कल्पना नै गरेका थिएनन् । तर स्थानीय बाटु शाही र उनका छोरा भरतले भान्सामा दलितले छोएको भन्दै आफूमाथि कुटपिट गरेको भीमबहादुरले बताए । शरीरको घाउ देखाउँदै उनले भने, ‘मलाई चक्रले घरभित्र पठायो, बाहिर आउँदा किन भान्सामा छोएको ? भन्दै उसका आफन्तले कुटे । मलाई खोलामा लगेर कुटपिट गरे, बेहोस भएपछि घरमा ल्याएर फालेछन् ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन आएकी जैसरा विकले परिवार नै मिलेर आफ्नो छोरामाथि कुटपिट गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘म गोठालो गएकी थिएँ, दिउँसो घरमा आउँदा छोरा थिएन । खोज्दै जाँदा बेहोस अवस्थामा फेला पारें, कुटपिट गरेर बेहोस भएपछि उनीहरूले आफ्नै घरभित्र लुकाएछन् ।’
दलितले भान्सा छोएको भन्दै निर्मम ढङ्गले छोरामाथि कुटपिट गरिएको उनको भनाइ छ । ‘आजसम्म मिलेर बसेका थियौं, आफ्नै छिमेकीले यस्तो गर्लान् भन्ने सोचेकी पनि थिइनँ’ उनले थपिन्, ‘दलित भएकै कारण हामीले कति पीडा सहने ? अब दोषीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । गाउँमै मिलाउन खोजेका थिए, म न्याय माग्दै सदरमुकाम आएकी हुँ ।’ पीडित बालकका मामा जगदिश विकले जातकै आधारमा आफूहरूमाथि विभेद गरिएको बताए । यस्तै पीडित बालकका फुपु बिस्ना विकमाथि पनि हातपात भएको छ । घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी दिएर गाउँमा पुग्दा उनीमाथि पनि छिमेकीले हातपात गरेका हुन् । दलितले आफूहरूको मातहतमा बस्नुपर्ने र उजुरी दिएको भन्दै गाउँलेले आफूमाथि कुटपिट गरेको भन्दै बिस्ना प्रहरीको शरणमा पुगेकी छन् ।
आरोपित बाटु शाहीले भने आफूले नभइ आफ्नो छोराले मात्र कुटेको दाबी गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘दलित हाम्रो घरभित्र पस्दा छोरालाई देउता आयो, शरीरमा देउता चढेपछि छोरोले नै यसलाई कुटेको हो । म घरदेखि केही टाढा थिएँ, मैले उसलाई हातले एक पटक पनि छोएको छैन ।’ घरभित्र पसेर भान्सामा छोएपछि आफ्नो छोरोले कुटेको उनले स्वीकार गरिन् । यता घटनाबारे ढिला मात्र जानकारी प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । घटनाबारे छानविन सुरु गरिएको भन्दै प्रहरीले जातीय भेद्भाव र छुवाछुत गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । दोषीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कारबाही थालिने प्रहरीको भनाइ
छ । जातीय भेद्भाव र छुवाछुत गर्नेलाई २५ हजारसम्म नगद जरिवाना तथा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै पीडकबाट असुल गरेर पीडितलाई २५ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि कानुनमा उल्लेख छ ।
घटनापछि पीडित पक्षले आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । यता दलित सेवा संघ सुर्खेतले पीडितका तर्फबाट प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । संघका उपाध्यक्ष टेकेन्द्र विश्वकर्माले जातीय विभेद गर्नेलाई
उन्मुक्ति दिन नहुने बताए । उनले यो घटनाले आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको बताए । यसैबीच राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष मनजित ताम्रकारले घटनाको बारेमा आफूहरूले पनि अनुसन्धान गर्ने जानकारी दिए । घरभित्र पसेकै कारण दलित बालकमाथि कुटपिट हुनु गम्भीर घटना भएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मितिः १९ चैत्र २०७३, शनिबार १३:०४